Shina: Noana ny mpiserasera, tsy misy resa-bary intsony! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2009 8:28 GMT
Nahantona hatramin'ny faha-8 jolay lasa teo ny Fanfou izay shinoa mpifaninana amin'ny Twitter. Hatramin'izao fotoana ny hany nolazain'i Wang Xing mpanangana ny Fanfou dia hoe noho ny antony “fikojakojana” io fa tsy misy resaka fahazoan-dalana hanao tolotra aterineto (ICP). Saingy noho ny fotoana fampiatoana azy nifanjohy tamin'ny rotaka tao Xinjiang sy ny tsy mbola nilazan'i Fanfou.com ampahibemaso tamin'ny mpampiasa azy hoe rahoviana moa no hiverina ny tolotra ataony dia maro no nino fa nahitsy (voasivana ho an'izay efa maharaka na harmonisé amin'ny teny frantsay) noho ny antony politika ny vohikala.
Ny dikan'ny Fanfou（飯否）amin'ny teny shinoa dia hoe : Efa nihinam-bary ve ianao? Izany no fomba fiarahaba shinoa iraisana indrindra manerantany. Ankehitriny moa dia izy no iray amin'ny vohikala be mpampiasa indrindra amin'ny sehatry ny famahanam-bolongana madinika any Shina. Mitovy amin'ny tava ahafantarana ny Twitter ity vohikala nipoitra tamin'ny 2008 ity. Mitovy rahateo ny API (Application programming interface) ampiasainy sy ampiasain'ny Twitter. Ankoatra izany dia matanjaka kokoa noho ny Twitter izy satria afa-mifandray amin'ny finday ao an-toerana sy ny fanaovana karajia shinoa QQ.
Diso fanantenana tanteraka ny mpampiasa ny Fanfou. Manontany i Cynthia :
Iza no afa-miteny amiko izay mitranga? Afak'omaly (7 Jolay), Tsy afa-nametraka hafatra tao amin'ny Fanfou mihitsy aho. Omaly (8 Jolay), Tsy afa-nanokatra ny vohikala akory aza aho. Hatramin'izao tsy misy na inona na inona tafaverina… Nisy inona? Tsapako ankehitriny fa miankin-doha amin'ny Fanfou aho, mahatsoaro ho malahelo sy foana anaty aho rehefa tsy misy ity fitaovana ity. Tsy misy toeran-kafa ahafahako mirediredy intsony, lasa sarotra ny fiainana.
Niandry ny fiverenan'ny tolotra ihany koa i Andro mangatsiatsiaka anaty fahavaratra, saingy manontany tena ny mpamaham-bolongana raha hitohy mandrakizay ny fikojakojana:
Niara-dalana tamiko nandritra ny fotoan-dehibe tamin'ny fiainantsika ny Fanfou…
Eritrereto izao, mbola marary ny foko.
Nanjavona tsy nanao veloma izy.
Tamin'ny 8 Jolay, nisy hafatra teo amin'ny vohikala hoe: fikojakojana hatamin'ny 10 Jolay.
Faly aho raha niato tao anaty fotoana fohy izy. Hifarana amin'ny fahafolon'ny volana ny fanadinako dia hiverina hiasa indray ny Fanfou, moa va tsy tsara izany?
Tsy nieritreritra mihitsy aho fa ho mandrakizay ny fikojakojana.
Te-hahazo ny anjara- “vary”-ny i Meredith Yan :
飯被和諧了好多天 說好十号晚上開的 昨天晚上大家都在刷飯否
我 要 開 飯
Ry Fanfou tsy foiko, rahoviana ianao no hiverina?
Nahitsy nandritra ny andro maro i Fanfou. Efa voalaza fa hiverina ny tolotra amin'ny 10 Jolay ary dia nanomboka nitady ny vohikala ny rehetra halina.
Tsy afa-nianoka fampisehoan-kiry akory aho, tsy nody ventiny ny fanantenako hahazo “vary”.
Maminavina aho fa maro ny viliam-bary tahaka ahy no mbola miandry (ny anjarany).
Malahelo ny tsy fahafahako miresaka amin'ny namako aho ankehitriny fa tsy hita ny nalehan'ny API-n'i fanfou.
Aiza – ny – variko
Nasongadin'i Tumblelogs fa voatery hampakatra ny fahaizany ny haitaony ny maro amin'ny mpiserasera Shinoa mba ahafaha-mihoatra ilay Rindrimbe Aroafo (Great Fire Wall):
Rehefa lasa (sisan-taolana) ny Fanfou, dia maro tamin'ny mpampiasa azy no nifindra monina tany amin'ny digu.com sy ny jiwai.de. Lasa mihabetsaka ny mpampiasa soratra shinoa notsorina any amin'ny Twitter sy ny Plurk. Miharihary fa lasa talenta vaovao ny “fahaiza-mihoatra ny rindrina” ^^.
Fanatanjahantena 1 ora izay